Nagu saabsan - Hebei Spring-Tex I / E Co., Ltd.
Ku saabsan Guga-Tex
Hebei Spring-Tex I / E Co., Ltd. waa shirkad ku takhasustay soosaarka iyo dhoofinta alaabada dharka hudheelka ah. Shaqaalaheena ugu muhiimsan waxay leeyihiin in kabadan 20 sano oo waayo aragnimo ah duurka dharka guriga. Maskaxdooda hal-abuurnimo iyo dadaalkooda ayaa ka dhigaya inay si firfircoon uga shaqeeyaan arimahan.
Waxaan leenahay saldhig wax soo saar xasilan oo alaabadayada inta badan loo dhoofiyo USA, Canada, Australia, Europe, iyo Bariga Dhexe. Waxaan si adag ugu hogaansanahay mabaadii'da: Tayadu waa aasaaska Shirkad, Amaahdu waa Nolosha Shirkad. Waxaan u tixgelineynaa baahida macaamiisha inay tahay mudnaanta ugu sareysa, waxaanan had iyo jeer u soo bandhignaa alaabada la cusbooneysiiyey macaamiisha qaraabada ah.
Ku soo dhawow macaamiisha aduunka oo idil si ay noola sameystaan ​​xiriiro ganacsi oo muddo dheer ah isla markaana midba midka kale ugu keeno guul iyo macaash. Waxaan rajeyneynaa ballaarinta ganacsigeenna macaamiisha ka kala socota gobollo kale oo badan oo adduunka ah.
Dhammaan alaabooyinkayaga waxaa laga filayaa inay noloshaada ka dhigaan mid raaxo leh.